SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bislama Catalan Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fante Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Malayalam Mam Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Telugu Tigrinya Tiv Tongan Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Valencian Vezo Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Muna 2014, Dare Rinotungamirira reZvapupu zvaJehovha rakapa mirayiridzo nezvechirongwa chitsva chokuparidza Shoko raMwari kunzvimbo dziri kumusoro kweEurope neNorth America. (Mabasa 1:8) Chirongwa ichi pachakatanga chaingoitwa munzvimbo shomanana dziri muAlaska kuU.S.A., Lapland kuFinland, uye Nunavut neNorthwest Territories kuCanada.
Zvapupu zvaJehovha zvakanga zvava nemakumi emakore zvichienda kunoparidza kunzvimbo idzi dziri kure. Asi vaisapedza nguva yakawanda variko uye chavainyanya kuita kwaiva kungopa vanhu mabhuku eBhaibheri.
Pasi pechirongwa ichi chitsva, mahofisi emapazi anotarisira basa reZvapupu zvaJehovha munyika idzi anokumbira vashumiri venguva yakazara (vanonzi mapiyona) kuti vanogara kwemwedzi mitatu kana kupfuura kune dzimwe dzenzvimbo idzi. Kana munzvimbo dzacho muine vanhu vakawanda vanofarira kudzidza Bhaibheri, vashumiri ava vanogona kutogara kwenguva yakati rebei uye kutoita misangano.
Asiwo kugara kunzvimbo idzi hakusi nyore. Pamapiyona maviri akaendeswa kuBarrow, kuAlaska, mumwe wacho aimbogara kumaodzanyemba kweCalifornia uye mumwe wacho kuGeorgia, kuU.S.A. Mumwaka wechando wokutanga vari muBarrow, kwakatonhora zvisingaiti, zvokusvika -38 degrees Celsius! Asi mwedzi mishomanana vasvika ikoko, vakashanyira misha yakawanda muguta racho uye vakatanga zvidzidzo zveBhaibheri 4, uye mumwe wavaidzidza naye mukomana anonzi John. Iye nemusikana wake vari kudzidza bhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? uye John anoudzawo shamwari dzake nevaanoshanda navo zvaanodzidza. Anoverengawo rugwaro rwezuva mukabhuku kanonzi Kuongorora Magwaro Zuva Nezuva achishandisa JW Library app iri pafoni yake.
KuNunavut kune imwe nzvimbo diki inonzi Rankin Inlet uye hakuna migwagwa inosvika ikoko. Saka mapiyona maviri akaendako nendege achibva atanga kudzidza Bhaibheri nevanhu vakawanda. Mumwe murume paakaratidzwa vhidhiyo inonzi Chii Chinoitwa paImba yoUmambo? akabva abvunza kuti Imba yoUmambo ichavakwawo riini munzvimbo iyoyo. Akawedzera kuti, “Kana ndichiripo pamuchaivaka, ndichauya kuchechi.”
KuFinland kune nzvimbo inonzi Savukoski uye vanhu vanogarako havana kunyanya kuwanda. Mapiyona akaendeswa ikoko akati, “Kuno kunotonhora chaizvo uye kwakazara sinou.” Asi vanoti vakasvika nguva yakanaka. Nei vachidaro? Vakati, “Takakwanisa kuparidzira nzvimbo yacho yose nokuti migwagwa yacho inogara ichibviswa sinou zvoita kuti ifambike zviri nyore. Nemhaka yechando chiriko, vanhu vanoswera vari pamba.”
Kuedza kwatiri kuita kuudza vanhu Shoko raMwari munzvimbo idzi kuri kufarirwa chaizvo. Mapiyona maviri paakashanyira meya werimwe guta rekuAlaska, meya wacho akabva anyora pasocial network mashoko airumbidza Zvapupu nezvezvimwe zvinhu zvaakanga adzidza uye akaisawo pikicha yekapepa kanonzi Chii Chinonzi Umambo hwaMwari?
Kunzvimbo inonzi Haines, kuAlaska, mamwe mapiyona maviri aikoka vanhu kumisangano yaiitirwa paraibhurari. Mumwe musi kwakabva kwauya vanhu 8, zvokuti pepanhau reko rakabva rabudisa nyaya yaitaura kuti kune varume vaviri vari muguta, mumwe akabva kuTexas uye mumwe kuNorth Carolina, vari kudzidzisa vanhu Bhaibheri. Rakapedzisa richiti: “Endai pajw.org kuti munzwe zvakawanda.”
Mushandirapamwe Wakaitwa kuLapland